FAQ - Hongwugas negesi Piping System
Onengqondo Hongwugas ™
Design & Ukufakwa
Lukathayela Engagqwali tubing (CSST) kuyinto nezimo, engagqwali ipayipi esetshenziswa ukuphakela igesi yemvelo ne-propane e izakhiwo zokuhlala, commercial nezezimboni.
Yiziphi izinzuzo nezimo igesi piping?
Ngaphandle kokunikeza ukuqina okukhulu, CSST nezimo, ivumela snaked emhlabeni izindonga ngokusebenzisa izithiyo nge nokufakwa okudingekayo kuphela enisemikhawulweni run ngamunye. Ukunciphisa inani nokufakwa kuzuzisa njengoba izidingo ngamunye ezengeziwe ngokuhlanganyela yenziwe futhi ihlolwe ukuvuza. A CSST igesi piping uhlelo has amalunga omzimba engaphansi, ngakhoke kancane engaba ukuvuza izindlela .
Ingabe CSST ephephile ukusebenzisa la emzini wami?
Njengazo zonke evunyiwe igesi piping izinhlelo, CSST iphephile lapho afakwe kahle. CSST kufanele sifakwe ngumuntu ngokuhambisana uchwepheshe ofanelekayo futhi nge Design abakhiqizi futhi Ukufakwa (mina D &) Guide, kuhlanganise kunenze nisondelane futhi isisekelo sohlelo.
Kuyini kunenze nisondelane futhi isisekelo?
Ubuhlobo obuseduze: Ixhuma metallic izinhlelo ukusungula embili kagesi kanye conductivity.
Isisekelo: Ixhuma phansi noma umzimba conductive efinyelela endaweni uxhumano.
National Association of State Fire Onogada (Nasfm) Iqalisa Lilonke Yellow Csst Safety Campaign NASFM ithokozisa US Senate ngoba Passing Isinqumo Ngokukhuthaza Ezemfundo Imizamo Yokuthuthukisa Safety in Over 6 Million ...
© HONGWUGAS Copyright - 2010-2017: Wonke Amalungelo Agodliwe. - Amandla by Globalso.com